Muxaadaro qoraal – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Category: Muxaadaro qoraal
Dheelminta iyo Qaadidda Nabiga SCW
Dheelminta iyo Qaadidda Nabiga Nabadgelyo iyo Naxariisi korkiisa ha ahaatee Dheelminta nabiga waxaa caddeeyay Quraanka iyo xaddiiska saxiixa ah kolka waxaa waajib ah in la rumeeyo in Nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee Eebbe dheelmay habeennimo asiga oo Maka ka baxay oo masjidka al-Aqsaa u baxay. Hase ahaatee, fuullinta (Micraajka) wuxuu ku caddyahay xaddiiska,... Continue Reading →
​Salafiyada maanta Iyo salafka Nabiga inoo tilmaamay farqigee u dhaxeeya ?
Waxaa soo ifbaxay kooxo sheeganaya salafiya oo dhabtu caqiidadadoodu tahay tan wahaabiyada ee Mohamed Cabdi wahaab Keenay iyadoo markaas doonaya ineey daboolaaan caqiidadadooduiyo magacooda wahaabiyada deeto la baxay SALAFIYA iyagoo iska dhigaya ineey ku taagan yihiin wadadii salafka oo eey Diinta u yihiin difaaca yaal Laakiin dhabtu saa ka fog . Nabiga caleyhi salaatu wasalaam... Continue Reading →
Ilahay swt miyuu samada kowaad usoo dagaa mise raxmadiisa ayaa soo dagta?
Magaca alle ayaan ku bilaweyna nabad gelyo iyo naxariis allaha yeelo xabibkena muxamed scw intaa kadib . Xadithka oranaya "ilahay swt waxuu usoo daga samada kowad(raxmadisa ayaa soo dageysa ) markas buu dhahaya war yaa wax i weydisanaya ee aan siya oo yaa i baryaya ee aan ajiiba " Xadithka waa mid saxiixa ah sugnashinhisana... Continue Reading →